Home » Lahatsoratra farany farany » Tourism » Tsy hitsangana hiverina ny fizahan-tany- UNWTO, WHO, UE tsy nahomby, saingy… » Page 3
“Raha ny iza no mety ho tafavoaka velona amin'ireo krizy ireo dia ireo izay mahatakatra fa miroso amin'ny fenitra vaovao isika, zava-misy vaovao, no ho tafavoaka velona. Misy tontolo vaovao eo am-pamoronana - tontolo ara-drariny kokoa sy ara-drariny ary, noho izany, maharitra kokoa. Tsy maintsy manamboatra ny tsirairay ny olona, ​​ary indrisy ny indostrian'ny dia dia tsy manana tantaram-pitiavana ho tsara indrindra amin'ny fanitsiana sy fisainana amin'ny sehatra vaovao.
“Andeha hotadidintsika fa nahavita nametraka lehilahy iray tamin'ny volana isika talohan'ny nahafahantsika nametraka kodiarana roa tamin'ny valizy. Mampiseho izany ny fomba mpandala ny nentin-drazana sy miadana amin'ny fivezivezena ny sehatray.
“Ny seranam-piaramanidina dia mila mifampatoky fahatokisan-tena bebe kokoa amin'ny fitokisana amin'ny fahadiovana sy ny fahadiovana, ary tsy maintsy manana politikan'ny famandrihana sy fanafoanana izy ireo. Tsy maintsy eken'ny hotely fa ny mpanjifa ao an-toerana sy isam-paritra no voalohany hitsidika azy, ka ny fetim-pirenena dia hahita fifamoivoizana tsaratsara kokoa. Aorian'izany, angamba ny mpifindrafindra nomerika, izay mitaky fifanarahana maharitra manokana dia hilatsaka, noho izany ny fifanarahana manokana sy samihafa dia tsy maintsy atolotra. Ny trano fisakafoanana koa dia tsy maintsy mikarakara bebe kokoa amin'ny fandefasana sy manamboatra seza ho an'ny elanelana sosialy sy seza ivelany. Izany rehetra izany ankoatry ny fanovana hafa dia tsy maintsy hampita ny fahatsapana fahadiovana sy fahadiovana madio.
“Nanjary niomerika kokoa ihany koa izao tontolo izao, ary mila mampifanaraka tsotra fotsiny sy mampiasa tsara ny teknolojia isika. Tsy maintsy mieritreritra ivelan'ny boaty isika. Ny fizahantany dia tokony hanaiky fa ny zava-drehetra dia mety ho lasa nomerika sy virtoaly, tsy ny fivoriana sy ny kaonferansa ihany, fa koa ny hetsika ampahibemaso toy ny kaonseritra na fivoriambe, eny fa na ny fanaovana gym sy hetsika manokana.
"Nanambady ny zanako vavy aho tamin'ny alàlan'ny zoom avy any Dubai, ohatra. Tany Amman, Jordania aho, niaraka tamin'ny rain'ilay mpampakatra, ary izy sy ny vadiny dia tao Dubai raha teo am-pita kosa ilay pretra. Tsy maintsy naka sary an-tsaina fotsiny izahay ary nampiasa teknolojia misy hieritreritra ivelan'ny boaty.
“Tsy maintsy fantarintsika aloha ny fiovana ary ekena izany, ary avy eo tokony hieritreritra an-tsaina ny fiovana ilaina amin'ny alàlan'ny teknolojia, ny faharetana ary ny fampiroboroboana marina sy mangarahara isika araka ny nohazavaina tamin'ny ohatra teo aloha. Izany dia hifanaraka amin'ny mpanjifa nomerika, tanora ary mahay vaovao.
“Amin'ny fizahan-tany dia tsy misy fifaninanana eo amin'ny mpifanolo-bodirindrina. Matetika, izay mahasoa ny mpiara-belona amiko dia tsara ho ahy. Izany dia toy ny fitsipika ao amin'ny "souk" iray izay izay mivarotra zava-manitra na mivarotra volamena dia eo amin'ny làlana iray ihany rehefa mitondra mpanjifa iray hafa.
“Raha fintinina, ho an'ny fitsangatsanganana an-trano sy isam-paritra mba ho velona indray aloha, dia misy dingana 3 ho an'ny fanarenana:
Ataovy velona hatrany ny orinasa, izay mila fanohanana mivantana avy amin'ny governemanta na findramam-bola fotsiny mba hahazoana antoka fa manana fotoana ampy hananganana ny zava-misy ny orinasa ary ho tafavoaka velona.
Takio ny sehatra tsy miankina hanitsy haingana amin'ny zava-misy vaovao misy an'ireo mpandeha an-trano sy isam-paritra. Atolory fifampiraharahana vaovao ho azy ireo. Avy eo ary aorian'izay vao afaka mijanona tsy mila manome fanampiana mivantana ny governemanta.
Atombohy ny fitsangatsanganana iraisampirenena miaraka amin'ireo tanora mpifindrafindra nomerika ary manolora politikam-piantohana manokana ho an'ny vahiny, izay mitaky fandaminana sy fonosana manokana avy amin'ny sehatry ny fampiantranoana ary koa governemanta mba hanohanana sy hifandraisana amin'ireo mpamatsy fiantohana eo an-toerana tsy amin'ny fampiroboroboana ihany fa amin'ny alàlan'ny visa sy haba. olana fa hijanona ela ihany koa.
“Ny hafatro amin'ny farany dia - miaraha mivory. Isika ihany no afaka manao an'io. Tsy misy governemanta afaka manao izany irery na tsara toa inona ny drafitra. Tokony hotadidintsika fa misy ny fotoana mety hivoahana amin'ny krizy rehetra - aza hadino izany. Tsarovy fa, amin'ny teny sinoa, ny teny hoe "crise" sy ny teny hoe "opportunity" dia iray ihany. "